"Abantu mabadumise uMdali emakhaya" - Ilanga News
Home Izindaba “Abantu mabadumise uMdali emakhaya”
“Abantu mabadumise uMdali emakhaya”
Abamabandla bagqugquzela ukuthotshelwa komyalelo kamengameli
AGQUGQUZELA ukutho-tshelwa komyalelo kahulumeni wokugonqa izinsuku eziwu-21 ngenxa yokubheduka kukasomqhele (Corona-virus) amabandla ezenkolo njengoba ethi amakholwa mawahlale emakhaya adumise uNkulunkulu khona.
NgoMsombuluko uMengameli Cyril Ramaphosa umemezele ukuthi kusukela namuhla ngoLwesine ebusuku, abantu mabazivalele ukugwema ukubhebhetheka kwaleli gciwane, kuphume abenza imisebenzi ebalulekile okubalwa kubo abezokuphepha, abezempilo abezitolo.
Inhloko yobumbano lwamabandla enkolo yobuKrestu eNingizi-mu Afrika,
i-Alliance of Pentecostal and Charismatic Churches in South Africa – ophinde abe ngumholi weCovenant Fellowship Church International (CFCI) – uMphostoli Collins Dhlomo, ugqugquzela wonke amakholwa angaphansi kwalolu bumbano ukuba athobele umyalelo wezempilo kuze kudlule le nkinga.
“Abazalwane mabafunde encwadini ka-Isaiah 26:20 lapho kufundeka khona kanje: ‘Wozani bantu bami ningene emakamelweni enu nizivalele iminyango, nicashe ngokuphazima kweso, kuze kudlule ulaka.’
“Kusobala-ke ukuthi esizobe sikwenza kuvunyiwe nasemaZulwini kuze kudlule lolu bhubhane. Sinenhlanhla thina ebandleni lethu ngoba sizosebenzisa ubuchwepheshe bale mihla ukuqhuba umsebenzi kaNkulunkulu.
“Bangasithola abazalwane kwi-website yethu ethi: www.cfci.org.za noma bavule kuYouTube CFCI TV,” kusho uMphostoli Dhlomo.
Osabambe njengenhloko yebandla lamaSheshi esifundeni iZululand, uMfu Canon Hamilton Mbatha, yena uthe: “Singephikisa-ne nesinyathelo sokuphephisa impilo yabantu ngoba thina makholwa sakhiwe ngenyama nomphefumulo, ngakho ngeke sivumele lesi sifo sicobo-shise isizwe seNkosi.
“Abazalwane mabamdumise noma kuphi lapho bekhona (uNkulunkulu) uzobe enabo naye.”
Umholi weSt. Johns Aposto-lic Faith Mission (iChibi) eSikhaleni, eMpangeni, uMbhishobhi Sipho Ntombela, naye uthi bamise yonke imisebenzi yebandla emuva kwalesi simemezelo ukuphephisa impilo yabantu.
Umfundisi Ayanda Nyobole we-Durban Methodist Church eThe-kwini, naye uthe bahamba nezwi likamengameli.
“Ngeke sibophise abantu ngamaphoyisa, umthetho usushayiwe, kuzomele siwugcine njengoba unjalo. Sinxusa abazalwane ukuba behlise imimoya bahlale ezindlini kuze kuphume izwi elibakhulula-yo,” kuphetha uMfu Nyobole.
UMfu Friend Nzama wamaNa-zaretha endlini yaseBuhleni eho-lwa yiNkosi Mduduzi “Nyazilwe-zulu” Shembe, ethintwa ngesinyathelo sakamuva sokuhlaliswa kwabantu ezindlini izinsuku eziwu-21 uthe: “Kusobala amanzi angene endlini akhukhula kwasani, nga-kho ukuze kuphephe abantu, makulandelwe umyalelo kamenga-meli. Siyabadinga abantu bephila, sicela babekezele kuze kube luyehla lolu dlambedlu lwesifo esi-bhebhethekisa okomlilo wequbula.”
Bheka ekhasini 20
Previous article‘Ubuhle bukwenza ubukeke sengathi awunangqondo
Next articleothisha bazofundisa emisakazweni